I-apt evumayo yonke, imboni emaphakathi kakhulu!
Panama City, Panama, i-Panama
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Cami
I-apt iyindawo yesimanje futhi ethokomele enazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uhlale kahle ePanama City, esendaweni ephilayo/epinki, eduze nemigoqo, izindawo zokudlela, ipaki yemvelo nezemidlalo, isiteshi sikamasipala, umgwaqo wabahamba ngezinyawo! ngezitolo, izimakethe kanye nokufinyelela kumasayithi ezivakashi edolobheni, ephelele kulabo abahambi abafuna ukuba nokuhlala okunamandla, okugcwele umbala, umculo kanye ne-multiculturalism, ngizojabula uma ungivakashela, ngiyazi ukuthi uzoyithanda!
Ifulethi linendawo eyodwa enkulu, lapho kukhona umbhede wendlovukazi onethezekile, umbhede kasofa onethezeke kakhulu, igumbi lokudlela elinezihlalo ezi-3 kanye nekhishi elihlome ngokuphelele elizojatshulelwa. Iphinde ibe nefasitela elikhulu lapho kungena khona ukukhanya kwemvelo futhi ungabona izihlahla endaweni.
4.86 ·87 okushiwo abanye
4.86 · 87 okushiwo abanye
Eduze kunepaki i-Andrés Bello enikeza ngezikhala izingane zokuzivocavoca, ukuphumula, ukudlala ezemidlalo nokubamba iqhaza emakilasini okudansa. Yindawo lapho ungathola khona izinhlobonhlobo zezikhungo ezifana nezindawo zokudlela, imigoqo, amathilomu, izindawo zokudlela, ama-salon, amakhemisi, izitolo ezinkulu, izindawo eziluhlaza ezimangalisayo, umbala kanye nempilo.
NginguCami, ngizohlala nginakho 24/7 ukukusiza.
UCami Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Panama City namaphethelo